Serivisy fanodinam-bolan'ny CNC / Mahazoa Quote an-tserasera / Metal & plastika amin'ny Internet - Createproto Tech Co., Ltd.
Tadiavo ny serivisy famolavolana CNC tsara indrindra ho an'ny faritra plastika sy vy anao, ary mamokatra ary manomeza ny tinady.
Fohy ho an'ny Computer Numerical Control, CNC no mandeha ho azy ny fitaovan'ny milina amin'ny alàlan'ny solo-sain'ireo rindrambaiko manatanteraka rindrambaiko efa voarindra mialoha. Ny milina CNC dia tsara indrindra ho an'ny faritra manokana iray ary azo ampiasaina amin'ny milina saika ny fitaovana fanakanana mivantana araka ny angon-drakitra 3D CAD anao.
CreateProto dia manolotra ny fikosoham-bary CNC, ny fihodinan'ny CNC, ny fandavahana ary ny fikitihana ireo fitaovana isan-karazany, toy ny fametahana metaly na plastika CNC. Ny milina famerenana haingana an'i CNC dia miasa tsara indrindra amin'ny prototyping haingana, fananganana ary fanandramana, jig ary fametahana ary singa ilaina amin'ny rindranasa fampiasa farany.
Serivisy momba ny milina Prototype CNC any Shina
Ny prototyping haingana an'ny CNC dia ampiasaina hamoronana prototypes plastika sy prototypes metaly, izay ahafahan'ny ekipa mpamolavola anao manahaka akaiky ny endrika sy ny vokatra farany, ary hita taratra ihany koa ny maha-zava-dehibe ny refy ara-batana sy ny asa fanamorana na fahasarotana, nefa manome ny toerana manova sy manatsara ny endrika.
Miaraka amin'ny milina fanodinana CNC namboarina namboarina sy ny lathes mihodina amin'ny CNC, dia manamora sy mandrindra ny fizotran'ny famolavolana CNC io. Ny serivisintsika momba ny prototyping CNC mandroso dia mifanaraka tsara amin'ny fandaharam-pamokarana takian'ireo mpanjifa raha toa ka afaka mitantana ny fiasan'ny tetikasa prototyping sy milina isan-karazany izay mitaky fitaovana manokana, faritra sarotra ary fahombiazan'ny famokarana optimum.
Masinina 3-axis ho an'ny famokarana famokarana fohy na singa tsotra, fikirakirana serivisy milina 4, 5-axis CNC ho an'ny faritra masinina ary ny làlan'ny fanamafisam-peo amin'ny alàlan'ny programa NC sy ny làlan'ny fitaovana, dia mihoatra ny fananganana nentim-paharazana sy ny famafana ny milina ary manome antoka antsika fa manao asa fanodinana prototype sarotra amin'ny fotoana ilana azy. Fantaro bebe kokoa ny prototyping CNC haingana, azonao atao ny mampakatra rakitra CAD maimaim-poana any.
Sombin-javatra vita amin'ny plastika CNC
Na dia tsy misy dikany mazava aza ny fametahana ny plastika, dia namboarinay manokana izy io ary namokatra ampahany sarotra amin'ny lafiny géometrika, fandeferana avo, mazava optique ary famaranana isan-karazany. Ny machining plastika CNC dia tsy mitovy amin'ny fametahana metaly. Ny fitaovana isan-karazany dia miaraka amina fanamby samihafa, noho izany dia mila fomba hafa amin'ny resaka fisafidianana ny fitaovana, ny masontsivana mihazakazaka ary ny teknika fanodinana mandroso.
Ny fahazoana ireo fenitra ireo dia mitaky fitaovana avo lenta, ary milina avo lenta, fitaovana ary fanapahana, fandaharana sy fanodinana mahomby, traikefa ary kolontsaina tsy manaiky afa-tsy ny kalitao avo indrindra. Mandritra ny fizotry ny milina dia manara-maso ihany koa ny fizahana rehetra izahay mba hahitana kalitao ary ampiorina amin'ny lafiny rehetra. Izahay dia manam-pahaizana amin'ny teknika sy fomba maro samihafa amin'ny milina plastika mahazatra.
Fitaovana vita amin'ny metaly vy
Ankoatra ny traikefa manan-karena amin'ny milina plastika, ny Createproto dia manome serivisy fanodinana vy vita amin'ny metaly izay mahafeno ny fepetra famaritana sarotra. Izy io dia mirakitra ny fihodinana, ny fikosoham-bary, ny fandavahana ary ny fikitihana ny metaly isan-karazany.
Ny ankamaroan'ny faritra metaly CNC dia vita amin'ny sokajy aliminioma, firaka magnesium, firaka zinc, vy vy, vy vy, varahina na varahina. Ny metaly sasany dia manana endri-javatra, toy ny lalantsara misy zoro toradroa, mety ho sarotra amin'ny milina ary mety misy ny fampiasana EDM na tariby EDM.
Izahay dia mamakafaka ny endrikao ary mandray ireo paikady fampitaovana sy milina manokana ampiasaina hamokarana ireo faritra misy vidiny mirary. Afaka manao asa ambaratonga faharoa toa anodizing, hoso-doko, firakotra vovoka, fitsaboana hafanana, fanapoahana fasika ary famolahana. Ny tontolontsika dia mamarana amin'ny faritra CNC hanohanana ny tanjon'ny hatsarana izay afaka manala ny mariky ny fitaovana.
Rehefa voatonona ny milina 5-axis mahazatra, dia manondro ny isan'ny torolàlana ahafahan'ny fitaovana manapaka, fa aorian'ny fametrahana ny fitaovana fanapahana dia mihetsika manerana ny famaky X, Y ary Z ary mihodina eo amin'ny famaky A sy B, miaraka. fikosoham-bary sy milina ary miaraka amina milina avo lenta avo lenta. Io dia ahafahan'ny faritra na ampahany be pitsiny sy be pitsiny misy sisiny maro azo zahana hatramin'ny sisiny dimy amin'ny ampahany amin'ny fananganana tokana. Izany dia manohana ireo injenieran'ny famolavolana hamolavola ireo faritra maro karazana miaraka amin'ny fandeferana henjana izay afaka manatsara ny fiasa sy ny fahombiazan'ny vokatra farany tsy misy fizarana voafetra.
Satria ny faritra maro novokarina tao amin'ny magazay prototype dia mitaky milina dimy sisiny, asa fanompoana milina 5-axis ary milina no be fangatahana fampiharana maro samihafa amin'ny sehatry ny indostria isan-karazany ao anatin'izany ny indostrian'ny aerospace, ny indostrian'ny sambo, ny indostrian'ny familiana fiara ary koa ny indostrian'ny famokarana angovo . Ny tombotsoan'ny milina dia misy ny famitana ambony ambany kalitao, ny toeran'ny toerana misy azy ary ny fotoana fohy fitarihana ary mamorona sisin-dàlana lehibe ho an'ireo orinasa vaovao.
Tombony azo amin'ny familiana 5-axis CNC
Famaranana ambony kalitao: Azo atao ny mamokatra ampahany vita amin'ny milina avo lenta miaraka amin'ny fampiasana cutter fohy kokoa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, izay afaka mampihena ny hovitrovitra izay mitranga matetika rehefa manamboatra lavaka lalina miaraka amina fizarana 3-axis. Mahatonga famaranana ambonin-javatra vita milina izy io aorian'ny milina.
Fahamarinana fametrahana toerana: 5-axis miaraka amin'ny fikosoham-bary sy milina miaraka no lasa zava-dehibe raha toa ka tsy maintsy manaraka ny kalitao henjana sy ny fenitra fampisehoana ny vokatrao vita. Ny machining CNC 5-axis koa dia manafoana ny filàna ny fivezivezena ny sangan'asa eo amin'ireo toeram-piasana marobe, amin'izay hampihena ny mety lesoka.
Fotoana fohy fitarihana: Ny fahaizan'ny milina 5 axis nohatsaraina dia miteraka fihenan'ny fotoana famokarana, izay mandika ho fotoana fohy kokoa ho an'ny famokarana raha oharina amin'ny masinina 3-axis.
Ny milina cnc ambany be dia be dia be eo anelanelan'ny prototyping sy ny famokarana betsaka, tsara ho an'ny fandaminana ny lalana sy ny fizahana amin'ny marketing izany. Ny famokarana amin'ny volume ambany amin'ny milina CNC dia vahaolana iray fanombanana tsara ihany koa ho an'ny fandaharam-pamokarana betsaka ho avy. Miorina amin'ity antony ity dia mihamaro ny orinasa manapa-kevitra ny hampiasa famokarana ambany satria haingana kokoa ny vokatra any amin'ny tsena. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mamorona efitrano bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny vokatra arakaraka ny tamberin'ny fampiasana.
Manomboka amin'ny prototype haingana mankany amin'ny famokarana ambany be, ity dingana ity dia nanjary firoboroboan'ny indostrian'ny milina CNC ankehitriny. Tsy vitan'ny fanatsarana haingana ny fahaizan'ny milina fanaon'ny ankamaroan'ny mpanamboatra azy io, fa mampihena ihany koa ny risika amin'ny fanamorana ny famolavolana endrika ary mitsitsy ny fotoana sy ny vidin'ny famokarana.
Ny fitambaran'ny fitaovana avo lenta sy ny fahalalana tsy manam-paharoa sy ny traikefan'ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia manome antsika sisiny lehibe ho an'ny famokarana hazakazaka fohy.
Nandritra ny taona maro, nanompo ireo mpanjifa avy amin'ny indostria maro samihafa izahay tamin'ny alàlan'ny famokarana faritra avo lenta sy tsara. Manome serivisy prototyping CNC mahazatra izahay ary serivisy fanodinana volavola ambany miaraka amin'ny teknolojia matihaninay.
Tena serivisy tokana ianao any Shina amin'ny tetikasan'ny milina rehetra. Na mila faritra tsotra ianao, singa sarotra na fizarana maro samihafa, dia mijoro eo akaikinao i Createproto mba hitantana ny fifangaroan'ny faritra sy ny habetsany.
Ny fahaiza-manaon'ny CreateProto ho an'ny serivisy Machining CNC
CreateProto dia manana ekipa mpamokatra injeniera matihanina sy masinina matihanina mba hampihenana ny fihenan'ny famokarana, hanatsara ny fandaharanasa CNC, hanafohezana ny fotoana fanaovana milina, hanatsara ny velaran-tany, amin'izay dia azontsika atao ny miantoka ny masinina mivoaka miaraka amin'ny valiny vokatra mety indrindra, ny ekipanay mpamokatra dia manaraka tanteraka fenitra hentitra raha ny kalitao sy ny sain'ny antsipiriany no resahina.
Ny milina 3-axis 3-axe sy 5-axis CNC dia manohana ny ekipa mba hampandeha haingana ny milina plastika CNC sy ny masinina metaly cnc misaraka sy haingana, ny faritra rehetra dia amboarina amin'ny fotodrafitrasanay manontolo, izay Omeo anay ny fanaraha-maso feno manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fanamboarana ny fizotran'ny machining an'ny CNC.
Ny milina CNC dia iray amin'ireo dingana manakiana indrindra amin'ny famokarana, manomboka amin'ny fatotra famokarana ka hatramin'ny faritra mandeha amin'ny fiara sy ny aerospace. Nahazo fahafaham-po ireo mpanjifa isan-karazany manerana ny indostria, nahazo traikefa lehibe sy fahalalana be dia be momba ny fomba hanamboarana faritra mitovy amin'ny zavatra nangatahin'ireo mpanjifan'ireo mpanjifa, ary nahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fandefasana fotoana i CreateProto. Ao amin'ny CreateProto, azonao atao ny mahazo serivisy fanodinana CNC haingana amin'ny 3-9 andro fiasana.
Ny tsy hitanao dia maninona, amin'ny CreateProto, tsy vitan'ny hoe mamokatra faritra avo lenta ihany izahay, fa nanasongadina loharanom-pahalalana ho an'ny CNC hanomezana fitantanana tetikasa ho an'ny mpanjifanay, manome torohevitra mety momba ny famolavolana ho an'ny famokarana, hanampiana ny volavolanao hahomby amin'ny dingana voalohany. Ny ekipa mpitantana ny tetikasanay no tsara indrindra manerantany. Ny fifehezana tanteraka ny famolavolana sy ny famokarana dia midika fa iray ihany ny loharanom-pahamarinana. Tsy mila mandeha any amin'ny orinasa maro ianao hahazoana ny fanampiana ilainao. Ankoatr'izay, ny rafi-pitsaboana mpanjifa tokana tokana dia manohana ny ekipan'ny mpamokatra mba hahafahan'izy ireo manao ny asany amin'ny fomba mahomby sy lavorary. Raha manana olana ianao dia ataonay tsara izany.
Fandeferana & Fitaovana fandefasana Machining CNC
Ny fandeferana ankapobeny an'ny Createproto dia ampiharina amin'ny DIN-ISO-2768 (salantsalany) ho an'ny plastika milina sy DIN-ISO-2768 (tsara) ho an'ny metaly metaly. Matetika isika dia afaka mitazona fandeferana amin'ny milina manomboka amin'ny +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) ka hatramin'ny +/- 0.002" (+/- 0.05mm). Ny endri-javatra ampahany dia ampirisihina ho matevina kokoa noho ny 0,02 "(0,5mm) any amin'ny faritra rehetra ary ilaina ny hatevin'ny tapany kely ambonin'ny 0,04" (1.0mm). Raha mila fandeferana henjana kokoa ianao dia tsy maintsy ampitaina ny fampahalalana momba ny refy mila refy tery tery kokoa, ny fandeferana geometrika ankapobeny dia azo ampiharina amin'ny sary amin'ilay ampahany. Ny fandeferana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny ampahany géomètriany sy karazana fitaovana. Ireo mpitantana ny tetikasanay dia hifampidinika aminao amin'ny lafiny rehetra amin'ny tetikasanao ary hanome ny ambaratonga avo indrindra araka izay azo atao. Zava-dehibe ny mitadidy fa ny fandeferana henjana dia mety miteraka fihenam-bidy fanampiny noho ny fitomboan'ny fakana, ny fitaovana fanampiny, ary / na ny fitaovana fandrefesana manokana. Ny fomba tsara indrindra ampiharana ny fandeferana dia ny fametrahana fandeferana henjana sy / na geometrika fotsiny amin'ireo faritra be krizy, izay hanampy hampihena ny vidiny.
Fifantina Material Machining CNC
ABS - (Retardant voajanahary / mainty / lelafo)
PC / Polycarbonate - (Mazava / Mainty)
PMMA / Acrylic - (Mazava / Mainty)
PA / Nylon - (Voajanahary / Mainty / 30% GF)
PP / Polypropylene - (Voajanahary / Mainty / 20% GF)
POM / Acetal / Delrin - (Mainty / fotsy)
Tombontsoa sy fampiharana
Tombony amin'ny milina CNC
Safidy maro karazana, tsy mila mifandefitra amin'ny akora matanjaka satria ny faritra dia azo alefa mivantana amin'ny milina tsy amin'ny plastika sy metaly.
Tena marim-pototra sy azo averina, ny milina CNC dia mamela ny fahamendrehana avo lenta sy ny famaranana sy / na ny antsipiriany.
Fihodinana haingana, ny milina CNC dia azo ampiasaina 24 ora isan'andro tsy tapaka, vonoina fotsiny ho an'ny fikojakojana.
Ara-toekarena ho an'ny faritra famokarana fohy izay mila fikirakirana maro. Boky azo refesina manomboka amin'ny iray ka hatramin'ny 100.000.
Ny prototypes amin'ny ankapobeny dia faritra lehibe sy be indrindra dia ara-toekarena amin'ny alàlan'ny prototyping CNC raha oharina amin'ny fizotran'ny prototyping haingana satria lafo ny ankamaroan'ny akora fananana RP.
Applications Machining Prototype
Modely Visual (Concept na Exhibit)
Prototypes momba ny injeniera
Fanamarinana ny famolavolana
Prototypes plastika amin'ny famokarana
Prototyping faritra be loatra
Modely fandalinana tsena
Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Cnc Prototyping haingana,